Coenzyme Q10 पाउडर (303-98-0) निर्माताहरू - Phcoker रसायन
बल्क मा Tadalafil पाउडर उत्पादन!
Urolithin A 8-Methyl ईथर
कच्चा Mt2 (Melanotan-II) पाउडर
कच्चा Lorcaserin पाउडर
कच्चा Lorcaserin Hcl पाउडर
कच्चा Orlistat Pwoder
प्राकृतिक Astaxanthin (472 61२-7-XNUMX)
कन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA)%%%
Nootropics （स्मार्ट औषधि）
कच्चा YK-11 पाउडर
कच्चा यौगिक 7P पाउडर
कच्चा PRL-8-53 पाउडर
कच्चा नोग्ल्लटेल पाउडर
इम्युनोग्लोबुलिन जी (आईजीजी)
NADP डिसोडियम साल्ट
नारिन पेप्टाइड पाउडर
क्विनोआ ओलिगोपेप्टाइड पाउडर
वीर्य भांग ओलिगोपेप्टाइड पाउडर
SEA काकडी पेप्टाइड पाउडर
बाजरा ओलिगोपेप्टाइड पाउडर
Tadalafil पाउडर (171596-29-5)
Coenzyme Q10 पाउडर (303-98-0)
सेप्टेम्बर 21, 2019
Coenzyme Q10 (CoQ10), जसलाई ubiquinone वा coenzyme Q को रूपमा पनि चिनिन्छ, एक इन्जाइम स्वाभाविक रूपमा उत्पादन हुन्छ?
एकाइ: 25kg / ड्रम
क्षमता: 1200kg / महिना
Coenzyme Q10 पाउडर (303-98-0) भिडियो
Coenzyme Q10 पाउडर (303-98-0) Specifications
उत्पादन नाम कोनजाइम Q10
रासायनिक नाम CoQ10
ब्रान्ड NAME Coenzyme Q10 पाउडर
औषधि वर्ग एंटी-एजिंग पेप्टाइड
कैस नम्बर 303-98-0
आणविक Fओमला C59H90O4
आणविक Wआठ 863.34
Monoisotopic Mass 863.365 g · mol-1
पिउने Point 48 – 52 ° C (118 – 126 ° F; 321 – 325 K)
Fपुनर्जन्म Point N /
जैविक आधा-जीवन 33 घण्टा
रंग पहेंलो वा सुन्तला रंग
Sभव्यता पानीमा अघुलनशील
Aपप्पेशन Vit बायोएक्टिभ यौगिकको रूपमा यसको भिट्रोमा यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता गुणहरू अध्ययन गर्न
High उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी को एक मानक को रूप मा
Exerc प्रयोग गरिएको मुसा महाधमनीमा यसको प्रभाव अध्ययन गर्न
Ular सेलुलर CoQ uptake परखमा
के हो कोनजाइम Q10 (CoQ10)？
Coenzyme Q10 (CoQ10), जसलाई यूब्यूकिनोन वा कोएन्जाइम क्यू पनि भनिन्छ, मानव शरीरमा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने इन्जाइम हो, हरेक कोष र टिशूहरूमा पाइन्छ। यसले ऊर्जा उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने, फ्रि रेडिकलहरू बेवास्ता गर्ने, र कोषहरू दुवै शरीर र छालामा स्वस्थ राख्ने जस्ता थुप्रै जैविक कार्यहरू समावेश गर्दछ।
एक युवा शरीर को आवश्यकता धेरै Coenzyme Q10 उत्पादन गर्न को क्षमता छ। यद्यपि, विभिन्न कारकहरू जस्तै बुढेसकाल र तनावले कोइन्जाइम Q10 को स्तर कम गर्न सक्छ। नतिजाको रूपमा, कोशाहरूको क्षमता पुन: उत्पन्न गर्न र तनाव अस्वीकारको सामना गर्न।
किनभने Coenzyme Q10 गिरावट बुढेसकालको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, यो बुढेसकालको सबैभन्दा सही बायोमार्कर्स मध्ये एक हो।
Coenzyme Q10 पाउडर पहेंलो वा सुन्तला रंगको पाउडर हो, धेरै डाक्टरहरू र अन्वेषकहरू विश्वास गर्छन् कि Coenzyme Q10 पाउडरले धेरै बिमारीहरूको उपचार गर्न र वजन घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। Coenzyme Q10 पाउडरले विभिन्न प्रकारका बिरामीहरूको भविष्यका उपचारहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ भन्नेमा त्यहाँ एउटा ठूलो सौदा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यहाँ पहिले नै प्रमाण छ कि सुझाव दिन्छ Coenzyme Q10 पाउडर उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ:
Coenzyme Q10 पाउडर वजन छाला मा सहायता गर्न तपाइँको छाला को जवान राख्न र मद्दत गर्न सक्छ।
Coenzyme q10 पानी घुलनशील पाउडर लाभ
सेलमा उर्जा उत्पन्न गर्नुहोस् र जीवन शक्ति बूस्टरको रूपमा मद्दत गर्नुहोस्
हृदय रोग को उपचार गर्न सहयोग
पार्किन्सन रोगको उपचार गर्न सहयोग
गमहरू स्वस्थ रहनुहोस्
प्रतिरोधक क्षमता बढाउनुहोस्
8.Coenzyme Q10 कोषहरू द्वारा सेलको वृद्धि र मर्मतको लागि आवश्यक उर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
9.Coenzyme Q10 पनि शरीर द्वारा प्रसाधन सामग्रीमा एक antioxidant को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
Coenzyme q10 छालाको लागि पाउडर
Coenzyme Q10 स्वस्थ छाला को लागी एक महत्वपूर्ण एंटी-एजिंग पोषक हो। कडा एन्टीआक्सीडन्टको रूपमा काम गरेर, यसले बुढेसकालका लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्न फ्रि रेडिकलहरू बेअसर गर्दछ। Coenzyme Q10 लाई ubiquinone ("सर्वव्यापी क्विनोन") पनि भनिन्छ, किनकि यो वनस्पति र जनावरहरूमा उपस्थित छ, मानव छाला सहित। यो श्वसन मा एक महत्वपूर्ण अणु हो। यसको सामयिक अनुप्रयोगले एटिपीको रूपमा उर्जा उत्पादन बढाउँदै माईटोकोन्ड्रियल गतिविधि पुनर्स्थापित गर्दछ, थप नयाँ कोलेजेन बनाउन आवश्यक शक्ति घटाउँछ। Coenzyme Q10 तपाईंको मनपर्ने बेस क्रीम वा एक antioxidant बूस्ट को लागी पानी आधारित सूत्र मा जोड्नुहोस्।
Coenzyme Q10 छाला हेरचाहको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसले कोलेजेन र अन्य प्रोटिनहरूको उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जुन एक्स्ट्रासेल्युलर म्याट्रिक्स बनाउँछ। जब एक्स्ट्रासेल्युलर म्याट्रिक्स विघटन वा कम हुन्छ, छालाले यसको लोच, चिकनाई, र टोन गुमाउनेछ जसले झुर्रीहरू र अकाल वृद्धावस्था निम्त्याउँछ। Coenzyme Q10 समग्र छालाको अखण्डता कायम गर्न र बुढ्यौलीको लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
एक antioxidant र नि: शुल्क रेडिकल स्क्याभेन्जरको रूपमा कार्य गरेर, Coenzyme Q10 वातावरणीय तनाव विरुद्ध हाम्रो प्राकृतिक रक्षा प्रणाली बढाउन सक्छ। Coenzyme Q10 सूर्य हेरचाह उत्पादनहरूमा पनि उपयोगी हुन सक्दछ। डाटा छाला हेरचाह उत्पादनहरु मा Coenzyme Q10 को दीर्घकालिक प्रयोग संग झुर्रियों को एक कमी प्रदर्शन गरेको छ।
Coenzyme Q10 मलाई क्रीम, लोशन, तेल आधारित सीरम, र अन्य सौंदर्य प्रसाधन उत्पादनहरूमा प्रयोगको लागि सिफारिस गरिन्छ। Coenzyme Q10 विशेष गरी एन्टीएजिंग फॉर्मूलेसन र सूर्य हेरचाह उत्पादनहरूमा उपयोगी छ।
कोएन्जाइम Q10 युक्त फार्मूलाको साथ सामयिक उपचारले छालाको Q10 स्तर सुधार गर्दछ र antioxidative प्रभावहरू प्रदान गर्दछ। Knott A et al। बायोफेक्टरहरू। (२०१ 2015)
Coenzyme Q10 को आहार सेवनको प्रभाव छाला प्यारामिटरहरू र सर्तमा: एक अनियमित, प्लेसबो-नियन्त्रित, डबल ब्लाइन्ड अध्ययनको नतीजा। Itemitek K et al। बायोफेक्टरहरू। (2017)
कोएन्जाइम Q10 र भिटामिन ई एसीटेटको Nanoencapsulation चूहों मा UVB विकिरण-प्रेरित छाला चोटबाट बचाउँछ। पेगोरारो एनएस एट अल। कोलोइड्स सर्फ बी बायोइन्टरफेस। (2017)
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड (NR-CL) (२23111११---00)
निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनोक्लियोटाइड (-53-84-))
NMN पाउडर (१० 1094--61१-7)
NADP डिशोडियम नुन (२24292२ 60 २-2०-२)
शke्के केमिकल एक उच्च-टेक उद्यम हो जुन सक्रिय फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती (एपीआई) मा विशेषज्ञता राख्दछ, अनुभवी पेशेवरहरूको एक ठूलो संख्याको साथ, उत्पादनको बखत गुणस्तर नियन्त्रण गर्न पहिलो श्रेणी उत्पादन उपकरण र प्रयोगशालाहरू।
Palmitoylethanolamide पूरक - पीईए कसरी पीडा को लागी काम गर्दछ?
भर्खरको एन्टी एजिंग ड्रग्स: निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)
हामीलाई म्याग्नीशियम एल थ्रोनोनेट नूट्रोपिक पूरक के थाहा छ?
त्याग: हामी यस वेबसाइटमा बेचिएका उत्पादनहरूको बारेमा कुनै दावी गर्दैनौं। यस वेबसाइटमा प्रदान गरिएको कुनै पनि जानकारी एफडीए वा एमएचआरएद्वारा मूल्या .्कन गरिएको छैन। यस वेबसाइटमा प्रदान गरिएको कुनै पनि जानकारी हाम्रो ज्ञानको उत्तममा प्रदान गरिएको छ र एक योग्य चिकित्सा व्यवसायीको सल्लाह बदल्नको लागि होईन। हाम्रा ग्राहकहरु द्वारा प्रदान कुनै पनि प्रशंसापत्र वा उत्पादन समीक्षा Phcoker.com को दृष्टिकोण होईन र सिफारिस वा तथ्यको रूपमा लिनु हुँदैन। प्रतिलिपि अधिकार - Phcoker Inc.